Umculo — UHAMBO LEE - OFFICIAL SITE
Ukuze umyalezo wakhe, Lolu hambo lwathatha enye indlela ukuze ukuqopha manje. Esikhundleni ubambisene abakhiqizi multiple, wayesebenza kuphela nge producer eselinesikhathi eside likhonza Gawvi for albhamu yonke ye- at Atlanta studio yakhe. Sonically, single Rise wokuqala “Shweet” ubonisa ithalenta olukhulu kokubili Gawvi kanye Trip Lee. With ukukhiqizwa yayo bathukuthele, the ufakazelwe yilabo abazibiza ithrekhi ukuthi classic eningizimu Houston gxuma nge New York-style leticocwako. Amavesi Trip silokhu esicacile njengoba benjalo ezibalulekile. Khonamanjalo, “sweet Victory” yakhela kusuka ivesi sakugcina ibe hook zishanela lokho kweso evuselelayo njengoba flow Trip sika ezithathelwanayo sibambelela. “Manolo” umbona waphinda team up with Reach Records’ siqu umuntu main nomngane oseduze Lecrae. Together, bobabili flip enye Paradigm hip-hop ngobuqili phakathi uvalwe nokwelukiweyo imvumelwano iziqhumane.